ဟား( ၅ )ကောင်ညီအစ်ကိုစုပြီး ဇွန်(၁၉)ရက် အမေစုမွေးနေ့အတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုပေးဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ တိုင်းကျော်.. – Cele Oscar
June 18, 2021 By L YC Knowledge
ဟားငါးကောငျ လူရှငျတျော အဖှဲ့က တော့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲ မြားတှငျ တတျနိုငျတဲ့ နရောကနေ ပါဝငျ ဆောငျရှကျဖို့ အတှကျ လှတျမွောကျ နယျမွေ တှငျ စဈသငျ တနျးတကျ ရောကျနေ ကွပွီ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လှုပျရှားမှု့ တှကေိုလညျး ပွညျသူတှေ သိရှိကွစဖေို့ အမွဲလိုလို ဝေ မြှ ပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ မိနဈပိုငျးလောကျ ကလညျး လူရှငျတျော တိုငျးကြျော ရဲ့ လူမှု့ ကှနျယကျမှာ ကွညျနူးစရာ သတငျးလေး တဈခု တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ မနကျဖွနျ မှာ ကရြောကျ တော့မယျ့ အမစေု ရဲ့ မှေးနေ့ အတှကျ မှနျမွတျတဲ့ လကျဆောငျတဈခု ပေးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အမရေဲ့ မှေးနေ့ အတှကျ သူတို့ တဈဖှဲ့လုံး နှဈခြီ သောကျခဲ့ကွတဲ့ အရကျကို သစ်စာ ဆိုပွီး လှူလိုကျ ကွပွီ ဖွဈပါတယျ။ အမေ ပွနျလာမှ တောငျရှညျ ရငျဖုံး ပွနျဝတျပွီး စငျပျေါပွနျတကျ မယျ့အကွောငျးကို လညျး အခုလို ရေးသား ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ။
“မနကျဖွနျ အမေ့ မှေးနေ့ ကို သားတို့ အတကျနိုငျဆုံး အကောငျးဆုံး ကွိုးစား စီစဉျထားတယျ အမေ။သားတို့ အမေ ပွနျလာမှ တောငျရှညျ ရငျဖုံး ပွနျဝတျပွီး စငျပျေါ ပွနျတကျမယျအမေ . ………ဪ မလေို့ အမေ တိုးကြျော ၊ ပိုးလေး ၊ ဝိုငျးကြျော ၊ ပွညျကြျော ၊ တို့ နှဈ နဲ့ ခြီသောကျ ခဲ့တဲ့ အရကျကိုအမေ့ မှေး နေ့ လကျဆောငျအဖွဈ ၊ သစ်စာဆို လှူလိုကျကွပွီ အမေ ၊ သားလညျး ဘီယာ မသောကျတော့ဘူး နျော အမေ”ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှကေလညျး ဟားငါးကောငျ အဖှဲ့သား တှပေေးတဲ့ မှေးနလေ့ကျဆောငျ လေးကွောငျ့ မကျြရညျကမြိ တဲ့အထိ ကွညျနူး ရကွောငျး မှတျခကျြ ပေးရေးသားထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးလညျး အပြျောတှကေူးစကျ သှားကွစဖေို့ ဒီသတငျးလေး ကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။
ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော် အဖွဲ့က တော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲ များတွင် တတ်နိုင်တဲ့ နေရာကနေ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက် လွတ်မြောက် နယ်မြေ တွင် စစ်သင် တန်းတက် ရောက်နေ ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု့ တွေကိုလည်း ပြည်သူတွေ သိရှိကြစေဖို့ အမြဲလိုလို ဝေ မျှ ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက် ကလည်း လူရွှင်တော် တိုင်းကျော် ရဲ့ လူမှု့ ကွန်ယက်မှာ ကြည်နူးစရာ သတင်းလေး တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မနက်ဖြန် မှာ ကျရောက် တော့မယ့် အမေစု ရဲ့ မွေးနေ့ အတွက် မွန်မြတ်တဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ မွေးနေ့ အတွက် သူတို့ တစ်ဖွဲ့လုံး နှစ်ချီ သောက်ခဲ့ကြတဲ့ အရက်ကို သစ္စာ ဆိုပြီး လှူလိုက် ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေ ပြန်လာမှ တောင်ရှည် ရင်ဖုံး ပြန်ဝတ်ပြီး စင်ပေါ်ပြန်တက် မယ့်အကြောင်းကို လည်း အခုလို ရေးသား ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မနက်ဖြန် အမေ့ မွေးနေ့ ကို သားတို့ အတက်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ကြိုးစား စီစဉ်ထားတယ် အမေ။သားတို့ အမေ ပြန်လာမှ တောင်ရှည် ရင်ဖုံး ပြန်ဝတ်ပြီး စင်ပေါ် ပြန်တက်မယ်အမေ . ………ဪ မေ့လို့ အမေ တိုးကျော် ၊ ပိုးလေး ၊ ဝိုင်းကျော် ၊ ပြည်ကျော် ၊ တို့ နှစ် နဲ့ ချီသောက် ခဲ့တဲ့ အရက်ကိုအမေ့ မွေး နေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ၊ သစ္စာဆို လှူလိုက်ကြပြီ အမေ ၊ သားလည်း ဘီယာ မသောက်တော့ဘူး နော် အမေ”ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်း ဟားငါးကောင် အဖွဲ့သား တွေပေးတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင် လေးကြောင့် မျက်ရည်ကျမိ တဲ့အထိ ကြည်နူး ရကြောင်း မှတ်ချက် ပေးရေးသားထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း အပျော်တွေကူးစက် သွားကြစေဖို့ ဒီသတင်းလေး ကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။